သင်ကြောင်ကြည့်ဖို့အစဉ်အဆက်တစ်ချိန်ကရှိပါသလား? သငျသညျ, ကြော့ရှင်း, သူမ၏လှုပ်ရှားမှုနူးညံ့မှုအခြို့ချောမွေ့မှုသတိပြုမိဖူးသလား အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကြောင်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လျှင်ပြည်သူ့ထို့နောက်သူကမှန်သည်, ပြောပါ ဣတ္ ။
အဆင်းလှသောလိင်၏အတော်များများကပင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌အလုပ်မှာသူတို့ရဲ့မောပန်းခြင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတခုရှုပ်ထွေး, အပူတပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများအမျိုးသမီးစွမ်းအင်ကိုအသုံးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ ထိုအဘို့အဖွင့်က၎င်း၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူတသမတ်တည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တိုင်းအမြိုးသမီးတအတွင်းရှိအတောင်ပံအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသောအစွမ်းထက်စွမ်းအင်, ထားရှိမည်။ ဒါဟာရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့အညီငြင်းပယ်နေချိန်မှာသို့သော်သူမကသူတို့၏အရည်အချင်းများနှင့်စွမ်းရည်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, သင်ဆွဲဆောင်မှုခံစားရသည့်အခါနှိုး "ငါ့ကို။ "
ဣတ္၏တန်ခိုးဘဝအခက်အခဲများမှာကြည့်ဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာဒုတိယအသက်ရှုနဲ့တူဖွင့်လှစ်။ ဒါပေမဲ့ဒီပါဝါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများပြသ, ဤမရနိုငျသညျ, အလှည့်အတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုအပါအဝငျအခွားသူမြားနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်, ယောက်ျား၏အသက်လမ်းသက်ရောက်သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကိုယ်နှိုက်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာသည့်အခါ? အမည်ရကြောင့်ထဲမှာပါဝင်နေသည်အခါ။ အားဖြင့် idly ထိုင်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိအကျေနပ်ဖို့ရှာကြံမထားပါနဲ့။
ဒါဟာဣတ္ add လိမ့်မည်ဟုအဓိကအပေါငျးတို့သကန့်သတ်ယုံကြည်ချက်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့တစ်ဦးချင်းသန်နိဋ်ဌာနျပြည်တွင်းရေးပြဿနာများ, ကြောင်းကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်။ မဟုတ်မမှန်မွေးဖွားထံမှသင်တို့ဣတ္၏အရင်းအမြစ်ချကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဆိုကြသည်ဆိုတာသတိရပါ။ ရုံက၎င်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းများအတွက်, သငျသညျဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်လက်ခံရရှိရန်နှင့်ချစ်ခြင်းပေးပုံကိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဒီတော့ထွက် "သင်၏ကိုယ်ပိုင် stylist Be" နှင့်အမျှသင်တန်းများတက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်အဆောတလျင်မထားပါနဲ့။ , သင်တစ်ချိန်တည်းမှာလက်မှတ်ရလာသောအခါသိမ်းဆည်းထားစွမ်းအင်၏ထုတ်ဖော်ခံစားရကြောင်းမျှော်လင့်။ လုံ့လဝိရိယတရားအားထုတ်ရန်, သင်ဣတ္ထမဆောင်ခဲ့နိုငျသောရလဒ်နှင့်တကွ, ပြည်တွင်းရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မပြုခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့် Chakra မှတစ်ဆင့်အသက်ရှု။
အဆိုပါဣတ္နိယာမ၏ထုတ်ဖော်အတွက်အရေးအပါဆုံးအရာ: သင်နေသောအဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံရန်, ရှိသမျှပြည်တွင်းရေးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ် ပဋိပက္ခများကို ။
ဒါကြောင့်သူနဲ့ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာနဲ့အရာအားလုံးကို - ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကဘာလဲ
တစ်ဦးအလေ့အထကဘာလဲ - အသုံးဝင်သောနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အထများ, သူတို့ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
ရှင်ပေါလု McCartney နဲ့သူ့ဇနီး, Saint-Barth ၏ကမ်းခြေအပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံစံကပ်တိတ်ဆိတ်နေသည်
အဆိုပါ loggia မှပြတင်းပေါက်လျှော
Band Neutrophils တိုးလာ
ဆံပင်ကြီးထွားမှုအတွက်ရိုးရာကုစား - မျက်နှာဖုံးများများအတွက်အထိရောက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
တုဗလကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ - ဘယ်လောက်မြန်မြန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပြဿနာများရှောင်ရှားရန်ပြုပါသလော